Jirid Af: Kabasho ee cad iyo madow
Kabasho ee cad iyo madow
– Masawiradaas cadka iyo madowga, kuwa dadka gaar ahaan, waa iga murugsiiyaan. Fal-caaddifeed guud ahaanba iska caadi ah. Layaabku waa in ay yahiin kuwa ugu danbeeya kuwa soo diira dareenkaas hilowga, ilaa iyo darajada ay iga qaadaan hadalka maalmo idil. Ma aan iska dhawri karo isku arkid 40 sano jir, tebayo joogtada.
Renato Llerena wuxuu koobka u dhaweeyay bushimihiisa, laakiin ma uusanin gaarin kabasho qaxweha, kaliya oo waa ka carafsaday. Waxa ay ahayd ladid ee caruurnimada oo uu ka dhigtay caado. Ma garwaaqsado isagoo cabay abadba. Renato waa sii wadtay…
– 40 jir, ka fogba xaadirkan, ee maalmahan soo xiga oo aan wali u baxnaanismarin ee i dhinac gudbi doona anigoo ka dareemin in xoogaaba. Waayo oo inta sanooyin oo aan sii jiro waxwalba waxaa ay sii noqdaan farakabaxsi! Caruurnimadaydu waxaa ay qaadadtay wax ku dhow abadnimo; da’-tobanaadku, wax ka yar intii aan jeclaan lehaa. Inta kale waxaa ay u egyahiin xusuus qalaad, sheekooyinka ee saaxiib.
Wuxuu fiiriyay sadaxdiisa waday, oo uu kula kulmi jiray khamiis kasta makhaayad-qaxweedka Cordano. Ilaa iyo mar uun ee bilowgii, waxaa ay ku heshiiyayn in fadhi kasta mid uun lehaan doono erayga. Waxaa jiray kooxo kale ay kula kulmaan sheekeeysi. Renato waa sii wadtay...
– Waan hubaa ku-dhawaadba in ay wax ku leedahay malediiradeeynta. 37 jirkayga waxaan da’da ku baddalay is-lehaanta waqtiga oo waa muran la’aan inaan ilmo ahaa maalin ama labo kahor. Waayana haddeer waananin ku hayin maskaxda joogtada. Hawlahayga waxaan u qabtaa anigoo ka fikirayo tagtada iyo timaadtada, sababta iyo danta, waxa aan sameeyona ma raago, ma ku fidsamo aminka.
Fiiradiisu waxaa ay ku dhaykagtay meelna, bigtana ee uumiga indhihiisa baa ku dartay in xoogaa ee erayo. Sadaxda wadayeed ma uu ka lumin faahfaah, waa u dhagabixiyayn dhamaan. Minqaxweha ayaa kaga jaray hadalka wareeg kale cusub ee qaxwe. Renato waa sii wadtay...
– Waan hubaa ku-dhawaadba? Waa u badan tahay inaan rabo aaminiddeeda. Mid waa garwaaqsadaa dhacdooyinka ee caruurnimadiisa, laakiin ma ahaanin qaab ee curinteeda, ee fahmid wacaasha ee sida loo waariyo. Mid hadda wuxuu ka gaaraa qura fiiro-abuurid, laakiin ma jiraan hubaalo, waayo cunuggu ma gorfeeyo xaalkiisa, sahal-ahaanba wuxuu isku hawliyaa qardajeexid ilbiriqsi walba, wax xiiseeyn ah ee aminbeegid aysanin ka jirin.
Sadaxdiisa waday, ka faa’iideeysanayayn hakashada, waxaa ay qaxweha u soo dhaweeyayn bushimaha, laakiin ma ay kabanin, kaliya oo waa ka carafsadayn. Waxaa ay ahayd caado laga bartay qofka lehaa maalintaas erayga. Renato waa sii wadtay...
– Ka shishena soo bandhigidba, wax raacsan ama ku lidsan, waa qaddac in.
Renato, oo sii wadi lehaa weerta, ayaa kala furay afka, mase ka soo baxin eray. Wadayadiisu waxaa ay yeeshayn dhadhanbeel khafiifsan. Udugga jawiga baa ka tirtiray. Mar ka marba, waxaa ay tebi jirayn qaxwe cabidda. Renato waa sii wadtay...
– Intee buu saameeyn doonaa inaanu ka lehaanno dadkeena waawayn wacyi jiritaankeena gaaban? Haddii mid uusanin ka fikiri lehin, wuxuu dareemi lehaa inuu jirayo ilaa iyo waaqiisa mana aysanin yeelan lehin macne kala qaybin aminka. Ficil kasta wuxuu qaadan lehaa isla intii ee amin. Ogaal-jaceelkuna? Muhashadu? Baqdintu? Kamadanbeeys walbaba waxaa ay yahiin waxyaalo dadajiya ama aayariya amin kasta. Jaahilnimadu waa kuu soo dhaweeysaa abadnimada aminka, aqoontuna salgaarlaawenimada timaadtada?
Ku lunsan dhaxda male-abuurkiisa iyo shakigiisa – dhacsaalan –, buu isku dayay uga tagid maankiisa meel sababtu ka jirin. Waa ku guuleeystay. Inkastoo uusanin u fahmin sidaas. Isagoo ka fikirin wuxuu sameeynayay, buu kabaday qaxweha. Aminkaasi wuxuu waaray intii ee caruurnimadiisa.
Qoraa: Rafael R. Valcárcel
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 19:06